Hafahafa ny kabarin’ny filohan’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana, Jean Eric Rakotoarisoa, taorian’ny
fanambarany tamin’ny fomba ofisialy ny fahalanian’ny kandida ho filoham-pirenena, Andry Rajoelina. Tsy nisy teny mikasika ny filoham-pirenena teo aloha, Marc Ravalomanana fa toa ilay iray foana no nindraindraina nefa izy namerina ilay fehezanteniny indray mandeha niresaka hasina sy soatoavina tamin’indray mitoraka iny.
Mampanahy ny hoavin’ny lalàmpanorenana Malagasy amin’ity taona ity sy ny amin’ny 5 taona raha tarafina amin’ny zava-nitranga teny Ambohidahy omaly. Voatery naka ny an’ny frantsay mihitsy ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana nanampiana ny teto.
Fahasahiana tsy roa aman-tany ny an’ny filohan’ny HCC omaly raha nilaza fa tsy Antananarivo irery akory no Madagasikara. Marina tokoa izany ara-jeografika saingy ny tao ambadik’ilay tiany nambara no nampametra-panontaniana ny maro.